Sawirro: Ciidamo Mareykan Ah Oo 11 Qof Shacab Ah Ku Dilay Deegaanka Bariire Ee Duleedka Afgooye.
Friday August 25, 2017 - 14:12:51 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in Ciidamo Mareykan iyo Soomaali ah ay Xasuuq daran ugeysteen dad shacab ah.
Sida ay SomaliMeMo u xaqiijiyeen dadka deegaanka Bariire Ciidamo Mareykan ah oo wata gaadiidka Gaashaaman ayaa xalay saqdii dhexe weeraray dhul beereedka ku teedsan deegaanka Bariire ee Shabeelaha Hoose.
Ciidamada Mareykanka iyo Maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ayaa dhul Beereedka Dajuuma ee caanka ah ku Dilay 11 Nin oo kamid ahaa beeralayda caanka ah iyo Mid kamida Nabadoonada beelaha dega gobolka Sh.hoose.
Ilo wareedyo mas’uul ah waxay xaqiijinayaan in ciidamada Mareykanka ay madaxyada ka toogteen ragga beeraleyda ah oo Cadadkooda lagu sheegay 8 qof halka warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in dhimashadu gaartay 12 qof.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada huwanta ah ay qafaasheen 7 kamid ah beeraleyda deegaanka Bariire, Meydadka dadka ay xasuuqeen ciidamada Mareykanka ayaa maanta lagu aasayaa dhul beereedka Dajuuma.
17,Augst 2017 ee bishaan ayay aheyd markii sidaan oo kale ciidamada Mareykanka ay dad shacab ah ugu xasuuqeen deegaanka Axmed Yare ee duleedka degmada Kamsuuma gobolka Jubbada Hoose waxaana xilligaas ladilay 7 qof oo dhammaantood isku qoys ahaa.